झापाको कनकाई हस्पिटल जोखिमपूर्ण भवनमा - Enepalese.com
झापाको कनकाई हस्पिटल जोखिमपूर्ण भवनमा
इनेप्लिज २०७२ साउन २० गते ३:०२ मा प्रकाशित
बिर्तामोड, २० साउन । झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालित कनकाई हस्पिटल मापदण्डविपरित सञ्चालन भइरहेको छ । विसं २०६३ देखि अस्पताल जोखिमपूर्ण भवनमा सञ्चालन भइरहेको हो । तर, यस विषयमा नगरपालिका, जनस्वास्थ्य कार्यालय मौन बसेका छन् ।
०६१ सालसम्म ईलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोड रहेको त्यस भवनमा शसस्त्र युद्धका बेला माओवादीले आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा परी केही प्रहरीको ज्यानसमेत गएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म भाडामा समेत नलागेको उक्त भवनमा हाल हस्पिटल सञ्चालन भइरहेको छ ।
हाल हस्पिटल रहेको त्यस भवनमा माओवादीले आक्रमण गरेको थाहा पाएका सर्वसाधारणहरु अझैपनि उपचार गराउन जाँदैनन् । ‘पहिले दोहोरो भिडन्त भएको घर हो त्यो,’ लामो समयदेखि बिर्तामोडमा बसोबास गरिरहेका एक वृद्ध भन्छन्– ‘त्यस्तो डरमर्दो अस्पताल किन जाने ? अन्त अस्पतालनै छैनन् र ?’
सो हस्पिटल स्वास्थ्य शिक्षा निर्देशिका ०७०को मापदण्ड विपरित सञ्चालन भइरहेको छ । निर्देशिका अनुसार धुवाँ–धुलो, ध्वनी तथा जमिन प्रदुषणमुक्त हुनुपर्ने, पर्याप्त पार्किङ, स्वस्थ वातावरणका लागि वगैंचा र फोहोर व्यवस्थापन पूर्वाधारयुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो अस्पतालमा कुनै पनि सुविधा छैन ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सञ्चालन भएकाले अस्पतालमा प्रदुषणको चर्को समस्या छ । पार्किङको समस्याका कारण अस्पतालको अगाडि राजमार्गमै एम्बुलेन्स रोकेको लाईन देख्न सकिन्छ । दुई अस्पतालबीचको दुरी कम्तिमा एक किलोमिटर हुनुपर्ने भएता पनि छेउमै सुविधासम्पन्न बी एण्ड सी अस्पताल छ । अगाडिपट्टि मनमोहन अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थलगत अनुमतिबिनै हस्पिटल सञ्चालनको स्वीकृति दिएको स्थानीयको आरोप छ । ती वृद्धले भने– ‘त्यस्तो डरमर्दो घरमा अस्पताल राख्न अनुमति दिने चाहिँ कस्ता हुन् ?’ अचम्मको कुरो त के छ भने, अस्पतालले टिनको एउटा टहरोमा आइसियू सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
कनकाईमा कार्यरत डक्टरहरुलाई अन्य मेडिकलमा धाउनमै भ्याइ–नभ्याइ छ । फिजिशियन डा. शरद भट्टराई भद्रपुर रोडस्थित साथी मेडिकलमा दैनिक सेवा दिन्छन् । उता मेची अञ्चल अस्पतालका डाक्टर राजु सेडाई सुटुक्क कनकाई आउँछन् । कनकाईबाट समय कटाएर उनी पनि साथी मेडिकल पुग्ने गर्छन् ।
हस्पिटल बेलाबेला विभिन्न कारणले विवादमा पनि आइरहन्छ । केही समयअघि बिर्तामोडस्थित यातायात कार्यालयको गेटमा सञ्चालित एक अवैधानिक मेडिकलले कनकाई हस्पिटलमा कार्यरत डा. प्रेम पौडेलको नामको स्टाम्प प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो । मेडिकलमा बसेकै व्यक्तिले निरोगिताको प्रमाणपत्रमा डा. पौडेलको हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् । (प्रमाणपत्र सुरक्षित छ) । प्रमाणपत्रमा डा. पौडेलको एनएमसी नम्बर १३३२७ भएको स्टाम्प र किर्ते हस्ताक्षर गरिएको छ ।
यसबारेमा बुझ्न डा. पौडेलको सम्पर्क नम्बर माग्दा हस्पिटलका निर्देशक फडिन्द्र चापागाईले आफूसँग फोन नम्बर नभएको भन्दै पन्छिएका थिए । ‘यातायातमा राम्रो काम मात्र कहाँ हुन्छ र ?,’ चापागाईले पत्रकारलाई उल्टै सम्झाउन थालेका थिए ।
उता मोरङका तीन अस्पताललाई भने विराटनगर उपमहानगरपालिकाले गत जेठमा कारवाही गरेको छ । मापदण्ड पूरा नगर्ने ३ वटा अस्पताललाई एक/एकलाख रुपैयाँ जरीवाना गरिएको हो । तर, झापामा भने नियमनकारी निकाय मौन रहेको छ ।